Mon Mon's Diary: June 2009
ခေါက်ဆွဲကို ကြိုက်ရာအသားဖြင့်ကြော်နိုင်ပါတယ်၊ ၀က်သားနဲ့ကြော်ထားပါတယ်။ ၀က်သားကို ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည်အနောက်တို့ဖြင့် အသားထဲစိမ့်ဝင်သွားအောင် နယ်ပါ။ ၀က်သားနှုးပြီဆိုလျင် အနေတော်အရွယ်လှီးပါ ဆီသတ်ရန်အတွက် ကြက်သွန်နီကိုပါးပါးလှီးထားပါ။ ဂေါ်ဖီကိုလည်း အနေတော်လှီးထားပါ (ကြိုက်ရာအရွက် များထည့်ပြီးလည်းကြော်နိုင်ပါတယ်)။ အားလုံးအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုလျင် ဆီထည့်ပါ။ ဆီကျက်လျင် ပါးပါးလှီး ထားသောကြက်သွန်နီထည့်ပါ။ ၀က်သားထည့်၊ ဂေါ်ဖီထည့်ပါ။ ခေါက်ဆွဲထည့်ပါ။ ဆား၊ အချိုမှုန့်၊ ပဲငံပြာရည် အနောက် အနည်းငယ်ထပ်ထည့်ပါ။ ရေနွေးအနည်းငယ်ထည့်ပြီး နာနာ သမအောင်မွေပါ
at 11:04 AM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
February 27 က တင်ထားတဲ့ ကျွန်မရဲ့ PR က June လကကုန်တော့မယ်။ ဘာသတင်းမှမကြားရသေး။ စာတိုက်ပုံးကို ခဏ ခဏဖွင့်ကြည့်ရတာလဲ အမောပါပဲ။ June 24 မှာ စာတိုက်ပုံးဖွင့်ကြည့်တော့ On Government Service လို့ ဗယ်ဘက်တောင့်မှာ ရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်။ စာအိတ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ စာအိတ်လေးကထူနေပါတယ်။ ဖွင့်မကြည့်ပဲသိခဲ့ ရပါပြီ။ ကျွန်မ PR Approved ဖြစ်ပြီးလို့ အကြောင်းကြားတဲ့စာလေးပါ။
ကျွန်မ PR စလျောက်ခဲ့စဉ်က ရုံးကထောက်ခံချက်မပါ။ Reason ရေးပြီး ကိုယ့်ဟာကိုယ်တင်ခဲ့တာပါ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ရုံးကထောက်ခံချက် ရေးပေးပါတယ်။ ကျွန်မရဲ့ probation period က၆လပါ။ ၆လ မပြည့်ခင် ကျွန်မ e-appointment ကိုကြိုလုပ်ထားတာ။ probation period အပြီး ၇လထဲမှာ။ ဖြစ်ချင်တော့ IT ရဲ့ VP က ကျွန်မ ၆လ မပြည့်ခင် Dubai ကို ထွက်သွားခဲ့တယ်။ Confirmed ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်မ PR ကတင်ပြီးနေပြီ။ ကျွန်မ ရမယ်လို့လဲ ကိုယ့်ကို ကိုယ်ယုံကြည် ပါတယ်။ PR Approved ဖြစ်ဖို့ ၄လနီးပါးစောင့်ခဲ့ရပါတယ်။
ICA က Letter ၁စောင်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရုံးမှာ လက်ရှိဘာ Position နဲ့လုပ်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်၊ Company Stamp & Authorised Signature အချက်အလက်တွေပါတဲ့စာ ၁စောင်ပါ။ June 25 ရက်နေ့မှာ ရုံးကိုအကျိုး အကြောင်းရှင်းပြတော့ရုံးက GM က လက်မှတ်ထိုးပေးပါတယ်။
ဆေးစစ်ရမယ့်စာရွက်လဲပါတယ်။ ဆေးစစ်ရမယ့်စာရွက်မြင်တိုင်း ကျွန်မ အရမ်းရင်တုန်ပါတယ်။ HIV & X-Ray ရိုက်ရမယ်ဆို တဲ့စာလေးပါ။
June 26 ရုံးသွားမယ်လုပ်တော့ အိပ်ရာကလုံးဝမထနိုင်ပါဘူး။ မနေ့ကတည်းက ကျွန်မ ရုံးမှာ Fever ရှိနေတာကိုလဲ အလုပ် လုပ်နေဆဲပါ။ ကျွန်မ Fever က ၃၇.၈ တောင်ရှိတာ။ ရုံးက HR ကိုပြောပြတော့ တော်တော်လန့်နေကြတယ်။ H1N1 များလား???
တကိုယ်လုံးနှုးချိနေပါတယ်။ Fever ၃၇.၆ ရှိပါတယ်။ ဆေးခန်းသွားဖို့ပြင်ဆင်ရပါတယ်။ ကိုယ်ကိုကိုယ်လဲ H1N1 များလားဆိုပြီး ကြောက်နေပါတယ်။ ဆရာဝန်ကိုပြောပြတော့ ဆရာဝန်ကသိနေပါတယ်။ ဆရာဝန်ပဲလေ။ စိတ်ထဲမှာတော့ တော်ပါသေးရဲ့ H1N1 မဟုတ်လို့ ရင်တုန်နေတာလေးတွေရပ်ပါတော့တယ်။ ဆရာဝန်က Urine Test စစ်ခိုင်းပါတယ်။ Positive ပါတဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်မ X-Ray ရိုက်ရချင်းမှ ဆရာဝန်ထောက်ခံချက်ကြောင့် ကင်းဝေးသွားပါတော့တယ်။
ကျွန်မ အဖြစ်ချင်ဆုံး PR ဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်မကို အထင်သေးသောသူများကို ကျွန်မလက်တွေ့ပြနိုင်ခဲ့ပါပြီ။
ကျွန်မအတွက်ကတော့ from June 22 to June 26 က ကံကောင်းခြင်း ၂ခု ကို တစ်ပတ်အတွင်း ရရှိလိုက်ခြင်းပါ။
at 2:44 PM2comments Posted by Myo Mon Yee Oo
ကြက်သားကို ဆား၊ ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့်တို့ဖြင့် အသားထဲ စိမ့်ဝင်သွားအောင် နယ်ပါ။ ငါးဖယ်ကိုထောင်းပြီး ပြုတ် ပါ၊ ပြီးရင် ရေထည့်ပြီးပြုတ်ပါ၊ နှုးတဲ့အထိပြုတ်ပါ၊ ပြုတ်ထားသော အရည်များကို မသွန်ပစ်ပါနှင့်။ တစ်ချိန် ထဲတွင် ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ငရုတ်ပွခြောက် အားလုံးကို ညက်နေအောင် ထောင်းပါ။ ကြာဇံကို ရေစိမ်ပါ။ ကြာဇံဖတ်ရေထဲမှာ ပျော်ပြီးဆိုရင် အနေတော်အရွယ် ကတ်ကြေးဖြင့် ဖြတ်ပါ။ မှိုခြောက်၊ ပန်းခြောက်များကို လည်း ရေစိမ်ထားပါ။ ၄င်းကိုလည်း အနေတော်အရွယ် ကတ်ကြေးဖြင့် ဖြတ်ပါ။ ငုံးဥကိုလည်း ပြုတ်ထားပါ။ ဆီ ထည့်၊ ဆီကျက်လာလျင် ထောင်းထားသော အရာများကိုထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။ အနံမွေးလာပြီဆိုလျင် ပြုတ်ထား ပြီးသော ကြက်သားများကိုထည့်ပါ။ ကြက်ပြုတ်ရည်ထည့်ပါ ရေနွေးဆူဆူထည့်ပါ။ ကြာဇံဖတ်ထည့်ပါ။ မှို ခြောက်၊ ပန်းခြောက်များထည့်ပါ။ ကြက်သွန်နီဥ သေးသေးလေးများ ထည့်ပါ။ ငံပြာရည်ထည့်ပါ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့် အနည်း ငယ်ထည့်ပါ။ ကြာဇံချက် ကျက်ပြီးဆိုလျင် သံပုရာသီး ကြက်သွန်နီစိမ်းပါးပါးလှီးထားသော၊ နံနံပင်၊ ငရုတ်သီးမှုန့် တို့ဖြင့်ထည့်ပြီး သုံးဆောင် နိုင်ပါပြီ။
ကြာဇံချက်ရဲ့အဓိကသော့ချက်မှာ - ငံပြာရည်ဖြစ်ပါတယ်။
at 7:54 AM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
ကျွန်မကျောင်းစတက်တော့ အိမ်က၁ခါတည်း တွက်ချက်ပြီး Bank ထဲကိုပိုက်ဆံထည့်ထားပေးတယ်။ မထည့်ခင် အပြတ် ပြောလိုက်တယ်။ ကုန်သွားရင် အထုတ်ပိုက်ပြီး ပြန်လာခဲ့တော့တဲ့။ ကျွန်မ ၁လကို ၅၀၀ နဲ့လောက်အောင်သုံးရတယ်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ဟင်း ချက်စားရတယ်။ သူများနဲ့လည်းပေါင်းမစားတတ်ဘူး။ ကိုယ်ဟာချက်တတ်ပြီး လာပေါင်းတဲ့သူက မချက်တတ်ရင် ကိုယ်က ကျွန်ကြီးလုံး လုံးကိုဖြစ်ရော။ ကျွန်မသုံးတဲ့အရာမှန်သမျှ စာရင်းမှတ်ပြီးသုံးရတယ်။ အဲဒီလိုသုံးတတ် အောင် ဖေဖေက သင်ပေးခဲ့တယ်။ ရန်ကုန်မှာ ကျွန်မဘာသုံးသုံးစာရင်းနဲ့မှတ်ပြီး သုံးရပါတယ်။ အခုချိန်ထိလည်း စာရင်းမှတ်ပြီး သုံးနေဆဲပါ။ အခုချိန်မှာ ၅၀၀ နဲ့တော့ ဘယ်လောက်တော့မှာလဲနော်။ ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာနိုင်ပြီးဆိုတော့ သုံးချင်သလောက်သုံးပေါ့။ လစဉ်လဲစုဖြစ်ပါတယ်။ ဖေဖေ့ ကိုလည်း လစဉ် ၅၀၀ ပုံမှန်ကန်တော့နေပါတယ်။ အလုပ်ထွက်ချင်တိုင်း ဖေဖေကိုဘာနဲ့ပို့ရပါမလဲ ဆိုတာ အမြဲတမ်းခေါင်းထဲဝင် လာပြီး အခုချိန်ထိ သည်းခံပြီးလုပ်နေရဆဲပါ။ ကျွန်မ ရဲ့အလုပ်က In charge ၈ခုကို ၁ယောက်ထဲ Handle လုပ်ရပါတယ်။ ကျွန်မ လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Dubai ရော၊ Singapore ကော အားလုံး၁ယောက်ထဲလုပ် ရပါတယ်။ ကျွန်မပင်ပန်းပါစေ။ ကျွန်မလုပ်တဲ့ အရာတိုင်းအောင်မြင်မယ်၊ ဖေဖေကိုပြန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုရင် ပင်ပန်းရကျိုးနပ်ပါတယ်။
ကျွန်မ မနက် ၇ နာရီမထိုးခင်မှာ အမြဲတမ်းပုံမှန်နိုးပါတယ်။ ၁သက်နဲ့တကိုယ် နေဖင်ထိုးအောင် မအိပ်ဘူးပါ။ ငယ်ငယ်က မေမေက အရမ်းစည်းကမ်းကြီးတယ်။ ၆နာရီထိုးတာနဲ့ အိပ်ရာကထရပါတယ်။ နေဖင်ထိုးအောင် အိပ်တာမေမေကလုံးဝမကြိုက်ပါ။ ၆:၀၅ ဆိုလို့ကတော့ တုတ်၁ချောင်းနဲ့ ရောက်လာ တတ်ပါတယ်။ မေမေက မနက် ၄နာရီကနေ ၆နာရီထိပုံမှန်ဘုရားရှိခိုးပါတယ်။
ကျွန်မ ဒီမှာရှိတဲ့ Night Club ၁ခါမှ မသွားဘူးပါ။ ဘယ်နားရှိမှန်းတောင်မသိပါ။ Singapore မှာ Night Club ရောက်မှ ခေတ်မီတဲ့လို့ခံယူထားကြတဲ့သူများ ကျွန်မကတော့ ဘယ်တော့မှမသွားပါ။
ဘယ်သူတွေဘာပြောပြော ကျွန်မဘယ်သူကိုမှ ဂရုမစိုက်တတ်ပါ။ အမှန်တရားကို လူတွေကလက်ကိုင်ထားကြပေမယ့် အမှန်ကို တည့်တည့် ပြောလာမယ်ဆိုရင် မုန်းတီးတတ်ကြပါတယ်။
at 8:53 PM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
ကျွန်မ Blog ကိုရေးရင်းကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ အခုမှအကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်တော့တယ်။ ကျွန်မ နာမည်အရင်းပဲသုံးပါ တယ်။ ကျွန်မ မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်သူကိုမှဂရုမစိုက်တတ်ပါဘူး။ အမှန်တရားကိုမြတ်နိုး ပါတယ်။ ကိုယ်မှန်တယ်ထင်ရင် ဘယ်သူ့ ကိုမှမကြောက်တတ်ပါ။ ကျွန်မရေးတဲ့ Blog မှာ အကုန်အမှန်တွေချည်း ပါပဲ။ မုသားမပါ။ လိမ်ညာမှုမပါ ပါ။
စာရေးဆရာမြေး၊ စာရေးဆရာသမီး ဖြစ်ပေမယ့် စာဖတ်ပရိသတ်ကို ဖတ်ချင်လာအောင်ရေးနိုင်တဲ့အဆင့် မရောက်သေးပါဘူး။ အဘိုးက မြကေတု ကလောင်နာမည်နဲ့ စာရေးပါတယ်။ ဖေဖေကတော့ မောင်တိုင်ပင် နာမည်နဲ့စာရေးပါတယ်။ Mandalay မြန်မာစာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကဆိုရင် အဘိုးကိုကောင်းကောင်းသိကြမှာပါ။ ကျွန်မကတော့ ကလောင်နာမည် မရှိသေးပါဘူး။ အရင်က ရှိတယ်။ မပြောပြတော့ဘူးနော်။ ရှူးတိုးတိုး။ အဘိုးသာရှိသေးရင် ကျွန်မကိုရေးပုံရေးနည်းသင်ပေးမှာ အသေအချာပါပဲ။ ကျွန်မ ရေးထားတဲ့ Novel ၂ပုဒ်ရှိတယ်။ ရန်ကုန်မှာကျန်ခဲ့တယ်။ ကျွန်မစာရေးတာထက် Mickey-Mouse & Minnie Mouse ပန်းချီဆွဲတာကိုပိုပြီးဝါသနာပါတယ်။
ကျွန်မရေးတာ တုံးတိချည်းဖြစ်ချင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ ကြိုးစားပြီးဖတ်ကြပါလို့။ ကျွန်မ Blog မှာ ဟင်းချက်နည်းများ၊ ဗဟုသုတ ဖြစ်စရာများ၊ Computer နည်းပညာများကိုဖြန့်ဝေပေးသွားမှာပါ။ ကျွန်မ Blog စာလာဖတ်ကြသူများ အသိပညာ ၁ခုခုရသွား မယ်ဆိုရင် ကျွန်မ အမြဲတမ်းပီတိဖြစ်နေမှာပါ။
at 8:46 PM 1 comments Posted by Myo Mon Yee Oo
ကြက်သားကို ဆား၊ ဆနွင်း၊ အချိုမှုန့်တို့ဖြင့်နှယ်ပါ။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ငရုတ်ပွခြောက် အားလုံးကို ညက်နေအောင် ထောင်းပါ။ ဆီထည့်ပြီး ထောင်းထားတာတွေကို ဆီသတ်ပါ (ဆီကို အနည်းငယ်ထည့်ပါ၊ အရည်သောက်ချက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆီများသွားလျင် စားမကောင်းပါ)။ ဆီသတ်ပြီးပြီဆိုလျင် ကြက်သားကို လုံးပါ။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ ငရုတ်ပွခြောက် ကြေသွားတဲ့ အထိလုံးပါ။ ဆူပြီးသား ရေနွေးထည့်ပါ။ (ကျွန်မ အဖွားပြောတာရိုးရိုးရေထည့်လျင်စားရတာ ဆိတ်တောက် ဆိတ်တောက်နှင့် စားမကောင်းပါ) ဗူးသီးအခွံနွာပြီး အနေတော်တုံးထားတာတွေကို ထည့်ပါ။ ဗူးသီးကျက်ပြီး၊ ရေကျပြီးဆိုလျင် ကြက်သားဗူးသီး ကာလသားဟင်း ၁ခွက်ရပါပြီ။
at 8:32 AM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
at 8:29 PM 1 comments Posted by Myo Mon Yee Oo
at 8:21 PM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
Labels: My Own Poems
ငါလေ ... မင်းကို သတိမထားခဲ့မိဘူး
ငါလေ ... မင်းကို ချစ်တတ်ခဲ့ရပြီ
at 8:19 PM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
အချစ်ဆိုတာ ၀င်ရောက်ခဲ့တာ မသိစိတ်က
ငါလေ ... သတိမထားခဲ့မိဘူး
နှလုံးသားနေရာ ၁ခုလုံးကို နေရာအပြည့်ယူထားခဲ့တာ
ငါလေ မင်းကို လွမ်းတတ်ခဲ့ရပြီ
at 8:11 PM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
အင်းဥကို Singapore မှာတော့ ၀ယ်လို့မရပါဘူး။ ရန်ကုန်ကနေ လူကြုံနဲ့ ပို့လိုက်လို့ပါ။ စားကောင်းပေမယ့် အရမ်းလက်ဝင်ပါ တယ်။ မိုးရာသီကာလမှ ရတတ်ပါတယ်။
ပထမဦးစွာ အင်းဥကိုရေစင်အောင်ဆေးပါမယ်။ ၁လုံးချင်းဆီကို အဖြူရောင်ဖြစ်တဲ့အထိ ဓားလေးနဲ့သေသေ ချာချာခြစ်ပါ။ ပြီးရင်ရေနွေးနဲ့ထပ်ပြီး ဆေးပါ။ ၁လုံးခြင်းဆီကို ထက်ခြမ်းခြမ်းပါ။ ဆနွင်း၊ အချိုမှုန့်တို့ဖြင့်နှယ်ပါ။ ကြက်သွန်ဖြူ ကိုညက်ညက်ထောင်းပါ။ ဆီပူလာရင် ညက်ညက်ထောင်းတာတွေကို ဆီသတ်ပါ။ အင်းဥထည့်ပါ။ အင်းဥ ကိုနှုးအိနေတဲ့ အထိပြုတ်ပါ။ အင်းဥကျက်ရင်သံပုရာသီးလေးနဲ့ညစ်စားပါ။
at 7:41 PM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
at 11:28 AM 1 comments Posted by Myo Mon Yee Oo
ကျွန်မရဲ့ Blog ကိုဖတ်ကြတဲ့သူများကို သိစေချင်သော စိတ်လေး ၁ခုရယ်ပါ။ ကျွန်မငယ်ငယ်က စာအရမ်းဖတ်ပါ တယ်။ ဖတ်ပြီး ကျွန်မကြိုက်သောအကြောင်းအရာများဆိုရင်း စာအုပ်လေးထဲမှာ မှတ်ထားပါတယ်။ ဒေါ်ရီကြိန်ရဲ့ အေးအတူပူအမျှ နှင့် အပေးအယူမျှပါစေ စာအုပ်၂အုပ်က ကျွန်မ အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်တွေပါဘဲ။ ဘယ်တော့ဖတ် ဖတ် ရိုးမသွားပါဘူး။ အိမ်ထောင်ရှိတဲ့သူတိုင်းဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေပါ။ ကျွန်မမှတ်ထားတဲ့စာအုပ်လေး ထဲကနေ အကုန်လုံးကိုပြန်ပြီး ဖြန့်ဝေလိုက်ပါတယ်။
ချစ်တယ် ဆိုတဲ့စကားကိုမပြောကြတဲ့လူ ၃မျိုး
၁။ အချင်းချင်းနားလည်ပြီးသားဖြစ်ပေမယ့် အခြေအနေ ၁ခုခုကြောင့်မပြောဘဲနေသင့်လို့နေတာ။
၂။ ရင်ထဲမှာရှိရင်ပြီးရော ဒီစကားကိုမပြောလဲဖြစ်တယ်လို့ ခံယူထားကြသူ။
၃။ အချိန်မရွေးရုန်းထွက်လို့ရအောင် အချည်အနှောင်မခံချင်လို့ တမင်ကိုမပြောကြတဲ့သူ။
၁။ ငယ်စဉ်ကမိမိမပြည့်ဝ၊ မဖြည့်ဆည်းနိုင်ခဲ့တဲ့ ဘ၀မျိုး ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရေး။
အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးရာတွင် မရွေးသင့်သော အချက်၃ချက်
၃။ ကာမဆနာ ၁ခုတည်းကိုတပ်မက်ပြီး အိမ်ထောင်ဖက်မရှာပါနှင့်။
၁။ မိန်းမလှမြင်တိုင်း ငမ်းငမ်းတက်ပိုးပန်းဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူ။
၂။ ကိုယ်ချစ်တဲ့မိန်းကလေးကိုမှ ဂရုစိုက်တတ်တဲ့သူ။
၃။ အနောက်တိုင်း Style, Lady First ဆိုတာကို ကျင့်သုံးတတ်တဲ့ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီး လူကောင်းတွေ။
၃။ အချော့ ကြိုက်လေရဲ့။ အိမ်ထောင်ရေးပိုမိုခိုင်မြစေရန်အတွက်ရယ်ပါ
လင့်ကျင့်ဝတ် ၅ ပါး
၁။ မိမိဇနီးဧ။် အရည်အချင်းကောင်းများကို ရှာဖွေလေ့လာပြီး ဇနီးသည်အား လေးစားမြတ်နိုးစွာ တာဝန်ပေးမှု ရှိ ရမည်။
၂။ မိမိရှာဖွေရရှိသော ပစည်းဥစာများကို ဇနီးသည်ထံ ၁အိမ်ထောင်လုံးအတွက် စားဝတ်နေရေးဖူလုံအောင် ပေး အပ်ရမည်။
၃။ ဇနီးမှတပါး တခြားသော အမျိုးသမီးများအပေါ် မပြစ်မမှား စိတ်မ၀င်စားပဲ ကာယိနြေကို ထိန်းသိမ်းရမည်။
၄။ ဇနီးသည်အား အချိန်အခါ၊ အခြေအနေအရ အ၀တ်အစားများ ပေးကမ်းရမည်။
၅။ မိမိဇနီးအား မြတ်နိုးချစ်ခင်ကြင်နာရမည်။
မယားကျင့်ဝတ် ၅ ပါး
၁။ အိမ်တွင်းမှုတည်းဟူသော စားဝတ်နေရေးအတွက် မှန်မှန်ကန်ကန်စနစ်ဇယားနှင့် ယောကျားရှာဖွေပေးသမျှ နှင့် လောက်ငအောင် စီမံနိုင်ရမည်။
၂။ အိမ်သုံးပစည်းမှန်သမျှ မလေမလွင့် မပျက်စီးမပျောက်ရှအောင် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရမည်။
၃။ လင့်ယောကျားမှတပါး တခြားသော အမျိုးသားများနှင့် ဆက်ဆံရာတွင် သန့်သန့်စင်စင်ဖြင့် ကာယိနြေကို စောင့်စည်းရမည်။
၄။ မိမိဘက်၊ မိမိခင်ပွန်းဘက် ဆွေမျိုးတို့အား ကူညီပေးကမ်းသည့်အခါ မျှမျှတတ တရားသဖြင့်ပြုမူရမည်။
၅။ မိမိသည် အိမ်ထောင်ရှင် ၁ဦးပြုရမည့်တာဝန်များ ပေါ့ပေါ့တန်တန်သဘောမထားပဲ လုံလ၀ီရိယပညာနှင့် ကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
မိဘအမွေဆက်ခံထိုက်သော သား၊ သမီး ၄ မျိုး
၁။ သားကြီး၊ သမီးကြီးအရင်း။
၂။ အမွေစား၊ အမွေခံအဖြစ် အထင်အရှား မွေးစားတဲ့သား၊ သမီး။
၃။ အမွေဆက်ခံဖို့ရည်ရွယ်ချက်မရှိပဲ မွေစားတဲ့သား၊ သမီး။
၄။ လင်ပါ၊ မယားပါ သမီး။
မိဘအမွေမခံထိုက်သော သား၊ သမီး ၂ မျိုး
၁။ မိဘစကားနားမထောင်ပဲ ခွေးနှင့်တူသောသား၊ သမီး။
၂။ အပျော်အပါးလိုက်စားရာမှရလာတဲ့သား၊ သမီး။
at 9:57 AM2comments Posted by Myo Mon Yee Oo
How to remove gallstones from gall bladder.
It's natural method. You can do it by yourself. Here is the way of method how to do.
It is true statement. Believe it or not. It's real situation. My father successfully removed gallstones from gall blader by natural method.
If you have any question, ask me by e-mail. I will help you as soon as possible.
ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးပြီး ဆီချက် အရင်ချက်ပါ။ ခေါက်ဆွဲသုတ် ထဲကို Mandalay ပဲမှုန့်၊ ငံပြာရည်၊ အချိုမှုန့်၊ မန်ကျည်းမှည့်၊ အချိုမှုန့်၊ ဆီချက်၊ ဂေါ်ဖီပါးပါးလှီး (ဂေါ်ဖီမရှိလို့မထည့်လိုက်ရပါ)နံနံပင်တို့နှင့် ရောနှယ်ပါ။ စားခါနီးကျမှ ကြက်သွန်နီကြော်လေး အနည်းငယ်လှအောင် အုပ်လိုက်ပါ။
at 1:14 PM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
ဗူးသီးကိုအနေတော်လှီးပါ။ အရေးကြီးတာ အခွံနွာဖို့ မမေ့ပါနှင့်။ ရွှေလိပ်ပြာမုန့်နှစ်ကိုသုံးပါတယ်။ (မုန့်နှစ်ကို ဆနွင်းအနည်းငယ်၊ ဆား၊ အချိုမှုန့်တို့နှင့်နှယ်ပါတယ်)။ အရေးကြီးတာ ဆီများများ မီးအေးအေးနဲ့ ကြော်ပါ။
at 12:53 PM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
at 10:48 AM 1 comments Posted by Myo Mon Yee Oo
at 10:42 AM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
at 10:35 AM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo
at 10:32 AM0comments Posted by Myo Mon Yee Oo